China Boiler ingxubevange pipe ingxubevange steel seamless ipayipi stock ifektri kanye nabaphakeli | Hongyi
Pigama lomkhiqizo Izinto Okujwayelekile Ukucaciswa Isicelo
Ingxubevange yensimbi ipayipi Usayizi: 12Cr1MoVG
JISG3458-88 ∮8-1240 * 1-200 ukushisa okuphezulu, ukushisa okuphansi kanye nokumelana nokugqwala embonini ye-petrochemical boiler kagesi
Ipayipi lokushisa eliphansi 16MnDG, 10MnDG, 09DG
I-ASTM A333Grade11 GB / T18984-2003
I-ASTM A333 ∮8-1240 * 1-200 45 ~ -195 low low pressure pressure pipe pipe and low temperature heat exchanger pipe
Ishubhu enkulu yokubilisa ephezulu 20G
I-ASTM SA106B / C
I-ASTM SA210A / C
DIN17175-79 ∮8-1240 * 1-200 ipayipi lokushisa, ibhokisi lokuqoqa kanye nepayipi lomusi we-boiler ephezulu
hIpayipi lomanyolo ocindezela kakhulu
16Mn GB6479-2000 ∮8-1240 * 1-200 imishini yamakhemikhali namapayipi anokushisa okusebenzayo kwe -40-400 kanye nengcindezi yokusebenza ye-10-32mpa
Ipayipi lokucindezela eliphansi
16Mn<Q345A.B.C.D.E> GB3087-2008 ∮8-1240 * 1-200 okwenza ibheyili yengcindezi ephansi naphakathi nendawo kubhayela wesitimela
Ukulethwa kwepayipi 10 #, 20 #
I-ASTM A106A, B, C, I-A53A, B
I-ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Jwayelekile seamless steel tube efanelekayo ehambisa uketshezi
Jikelele isakhiwo tube 10 #, 20 #, 45 #, 27SiMn
I-ASTM A53A, B
I-ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Kusebenza kusakhiwo esijwayelekile, ukwesekwa kwemishini yobunjiniyela, njll
Ingxubevange ipayipi uhlobo Seamless steel ipayipi. Ingxubevange yepayipi ingahlukaniswa ipayipi elingenamthungo lokusetshenziswa kwesakhiwo nengcindezi ephezulu yengxubevange engamelana nokushisa. Ngokuhlukile kunqubo yokukhiqiza kanye nomkhakha wamashubhu we-alloy, izakhiwo zemishini yamashubhu zishintshwa ngokuncishiswa kanye nokushisa. Finyelela izimo ezidingekayo zokucubungula. Ukusebenza kwayo kuphakeme kunokwethubhu yensimbi evamile engenamthungo, ukwakheka kwamakhemikhali kwethubhu ye-alloy kuqukethe ngaphezulu i-Cr, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana namazinga okushisa aphansi, ukumelana nokugqwala.Akukho ukwakheka kwe-alloy noma ukwakheka okumbalwa kwe-alloy kukhubhu evamile engenamthungo. Isizathu sokuthi i-alloy tube isetshenziswe kakhulu ku-petroleum, e-aerospace, embonini yamakhemikhali, emandleni kagesi, kubhayela, embonini yezempi nakwezinye izimboni ukuthi izakhiwo zomshini we-alloy tube ziguquka kahle futhi zilungise kahle.
Ingxubevange yepayipi isetshenziselwa ukushisa ipayipi lendawo yokubilisa okushisa okuphakathi naphakathi (ingcindezi yokusebenza ngokuvamile ayikho ngaphezu kuka-5.88mpa, izinga lokushisa elisebenza lingaphansi kuka-450 ℃); Isetshenziselwa ukushisa amapayipi angaphezulu, ama-economizers, ama-superheaters, ama-reheaters namapayipi embonini ye-petrochemical yama-boilers aphezulu (ingcindezi yokusebenza ngokuvamile ingaphezu kwe-9.8mpa futhi izinga lokushisa elisebenzayo liphakathi kuka-450 ℃ ~ 650 ℃).
Ingxubevange yensimbi isetshenziswa kakhulu esitshalweni samandla, isitshalo samandla enyukliya, ibhoyila elinengcindezi enkulu, isifudumezi sokushisa okuphezulu, isifudumezi nezinye izingcindezi eziphakeme kanye namapayipi okushisa aphezulu nemishini, yenziwe ngekhwalithi ephezulu yekhabhoni yensimbi, ingxubevange yensimbi yesakhiwo kanye nokushisa okungagqwali- insimbi engamelana, ngemuva kokugoqa okushisayo (i-extrusion, ukunwetshwa) noma ukugoqa okubandayo (ukudweba).
Ingabuyiselwa ku-100% kabusha, ngokuhambisana necebo likazwelonke lokuvikelwa kwemvelo, ukongiwa kwamandla kanye nokongiwa kwemithombo. Inqubomgomo kazwelonke ikhuthaza ukunwetshwa kwensimu yokufaka isicelo yengcindezi ephezulu yengxubevange ipayipi.NgaseChina, inani lokusetshenziswa kwepayipi lengxubevange kuvolumu yensimbi isiyonke liyisigamu nje salokho emazweni athuthukile. Ukunwetshwa kwensimu yesicelo samapayipi e-alloy kunikeza isikhala esibanzi sokuthuthukiswa komkhakha.Ngokusho kocwaningo lweqembu lochwepheshe begatsha lepayipi le-alloy le-China Special Steel Association, isidingo sepayipi lengcindezi ephezulu e-China sizokwenyuka ngo-10- I-12% minyaka yonke ngokuzayo.
Langaphambilini Ukucacisa okuphezulu okubandayo okudwetshiwe ngokunemba kwensimbi yensimbi engenamthungo
Olandelayo: Uhla lwentengo yensimbi egoqiwe eshisayo eshisayo insimbi yamapuleti ensimbi